976nm 400mW PM FBG Pigtailed Butterfly လေဆာလေဆာ Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > FBG သည်ရေစုပ်စက်ကိုတည်ငြိမ်စေသည် > 976nm 400mW PM PM FBG သည် Pigtailed Butterfly လေဆာ Diode ကိုတည်ငြိမ်စေသည်
976nm 400mW PM FBG တည်ငြိမ်သောရောင်စဉ်လှိုင်းအလျားကိုသေချာစေရန် fiber-optic FBG အကြိမ်ရေသော့ခတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော pigtailed butterfly laser diode ။ ကျွမ်းကျင်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော drive circuit နှင့် TEC control သည်လေဆာလုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ တစ်ခုတည်းသောစနစ်သို့မဟုတ် polarization ကိုထိန်းသိမ်းသော pigtail output ကိုသေချာစေသည်။ ဒီလေဆာကိုသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနနဲ့ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ဖိုင်ဘာလေဆာများသို့မဟုတ်ဖိုင်ချဲ့စက်များအတွက်စုပ်စက်လေဆာအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်သင့်လျော်သည်။
976nm 400mW PM FBG ၏အကျဉ်းချုပ် Ptatailed butterfly လေဆာရောင်ခြည်
976nm 400mW PM PM FBG ၏နိဒါန်းကိုတည်ငြိမ်စေသည့် pigtailed butterfly laser diode
၃.၇၆၆ မီလီမီတာ ၄၀၀ mW PM PM FBG ၏အင်္ဂါရပ်များအရောင်အသွေးစုံသည့်လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည်
974nm 976nm 980nm +/- 1nm အလယ်ဗဟိုလှိုင်းအလျား;
700 MW အထိအခမဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှု၊
Fiber Bragg တည်ငြိမ်တည်ငြိမ်;
၄. 976nm 400mW PM FBG တည်ငြိမ်သော pigtailed butterfly laser diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
optical fiber ကိုလေဆာ pump;
၅.၇၆ ဒသမ ၄ မီတာမဂ္ဂါဝပ် PM PM FBG ၏အလင်း - လျှပ်စစ်လက္ခဏာများ။
LD Threshold လက်ရှိ ဟုတ်တယ် 90 110 mA CW
output ကိုပါဝါ Pf 400 mW (BOL) <900mA လျှင်
LD ရှေ့သို့လက်ရှိ အကယ်၍ 900 mA Pf = သတ်မှတ်ထားသောပါဝါ
အခမဲ့ပါဝါ Kink Pkink 450 mW > = 1.2 * Rated ပါဝါ
TEC လက်ရှိ ITEC2A Tcase = 75â "
TEC ဗို့အား Vtec 3.5 V Tcase = 75â "
၆. ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်၏ 976nm 400mW PM FBG တည်ငြိမ်သောပွတ်လိပ်ပြာလိပ်ပြာလေဆာ Diode
၇.၇၆nm ၄၀၀ မီဂါဝပ် PM FBG ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း Ptatailed butterfly laser diode ကိုတည်ငြိမ်စေတယ်
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊ တရုတ်လုပ်၊ စျေးပေါ၊
အသေးစား Package 974nm 300mW DIL Pump Laser ကို TEC Cooler မသုံးပဲ